महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार २०७६ बाट वरिष्ठ पत्रकार दाहाल सम्मानित
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार होमनाथ दाहाल महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार २०७६ बाट सम्मानित भएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वरिष्ठ पत्रकार दाहाललाई शीतलनिवासमा महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्मान गरेका हुन् । यस्तै डा. रामदयाल राकेश पनि महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् । सम्मानित हुने वरिष्ठ पत्रकार दाहालले २०२१ सालबाट पत्रकारिता सुरु गरेका थिए । दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासहित लोकतन्त्र बहालीका आन्दोलनमा पटक-पटक जेल यातनासमेत भोगेका थिए । सम्मानित दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति, गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकसमेत भइसकेका छन् । २०५६ मा ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभाको सांसदमा समेत उनी विजयी भएका थिए ।
यस्तै सम्मानित अर्का व्यक्ति डा. रामदयाल राकेश नेपालको लोकसंस्कृतिको विषयमा पोस्ट डक्टरल रिसर्च उपाधि पाउने पहिलो व्यक्ति हुन् । नेपाली लोक संस्कृति, मिथिला संस्कृति र हिन्दी साहित्यमा डा. राकेशका दर्जनौं कृति प्रकाशित छन् ।
प्रतिष्ठानले प्रेमसागरी देवी निधि पुरस्कार २०७६ बाट काशीदेवी झा र गिरिराजकुमारी (ज्ञानु) प्रसाईंलाई सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुने काशीदेवी झा सहिद दुर्गानन्द झाकी धर्मपत्नी हुन् । दिवंगत दुर्गानन्द झाले २०१८ माघ ९ गते जनकपुर भ्रमणमा गएका राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेका थिए । त्यस्तै सम्मानित हुने गिरिराजकुमारी (ज्ञानु) प्रसाईं समाजवादी नेता चिन्तक सिके प्रसाईंकी धर्मपत्नी हुन् ।
सीके प्रसाईं चिन्तन प्रतिष्ठान स्थापना गरी ज्ञानु प्रसाईं नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको विचार आन्दोलनमा क्रियाशील रहँदै आएकी छन् ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएको देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले दिनप्रतिदिन... ८ मिनेट पहिले
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चट्याङसहित वर्षा जारी छ । दिउसोबाट हावाहुरी, चट्याङ र असिनाका कारण उपत्यकाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ... २६ मिनेट पहिले
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुँडाल र नहुकल सुवेदीको नाम अनुमोदन भएको छ । शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा... ४६ मिनेट पहिले